Eny amin’ny kianjan’Alarobia no hanatantosana ny hetsika, manomboka amin’ny 06 ora hariva ka seho sy dihy amin’ny sehatra maro samihafa no hisantarana azy. Ireo DJ malaza eto amintsika toa an’i Cyemci, Johan, Jicco…. no hanohy ny lanonana manomboka amin’ny 8 ora alina. Hampiana betsaka kokoa noho ny teo aloha ny jiro sy ny karazana “effet spéciaux” hampiasaina amin’ity taona 2019 ity, raha ny fantatra. Mpiambina miisa 120 no hiambina ny tanàna amin’io alin’ny sabotsy io hahafahan’ny mpianakavy, ny ankizy ary ny tanora miala voly tanteraka. Hisy ny toerana natokana hiandrasan’ireo izay tsy afaka mody amin’ny 12 alina miandry ny andro maraina raha ny fantatra hatrany. Tohanan’ny orinasa Star ny hetsika ka hisy ny fizarany ny ranom-boankazo sy XXL eo am-pidirana ho an’ireo mamandrika toerana amin’ny VIP.